Ezona ndawo zintle zolwandle zasemanzini zango-2022: Yonke into ekufuneka uyazi | Ngeentlanzi
IsiJamani sasePortillo | | Ihlaziywe 15/07/2021 14:39 | Izixhobo, Amanzi olwandle
Xa kuziwa ekuqalekeni kwihlabathi le-aquarium, kufuneka sazi ukuba kukho iintlanzi zamanzi amancinci kunye nentlanzi yetyuwa. Zombini ezi ntlobo zeentlanzi zinokugcinwa ngokugqibeleleyo kwi-aquariums. Nangona kunjalo, kufuneka sazi yonke into esiyifunayo ukuze sikwazi ukuba nohlobo ngalunye lwe-aquarium. Kukho iinkcukacha kunye neemfuno ekufuneka zigutyungelwe ukuze izilwanyana esizizisayo kule aquarium ziphile kakuhle.
Ke ngoko, siza kunikezela eli nqaku lipheleleyo ukukuxelela zonke iimpawu zefayile iilwandle zasemanzini kwaye zeziphi iintlobo zeelwandle ezinokulungela iimfuno zakho.
1 Ezinye zezona ndawo zintle zolwandle
1.1 Ulwandle Simahla AT641A
1.2 Amanxweme asimahla AT560A Nano Marine Aquarium
1.3 I-Marina Aquarium Kit enezibane ze-LED
1.4 UFluval Flex
2 Yintoni i-aquarium yolwandle
3 Iindidi zamanzi olwandle
4 Ukhathalelo lwee-aquariums zaselwandle
5 Ngaba zikho iilwandle zasemanzini zabaqalayo?
6 Uyenza njani i-aquarium yaselwandle engabizi kakhulu
Ezinye zezona ndawo zintle zolwandle
Namvo 4pcs 200 Micron... Bona amanqaku Jonga umnikelo
I-Aquarium yaseLwandle ... Bona amanqaku Jonga umnikelo
Amanzi olwandle Bona amanqaku Jonga umnikelo
Ulwandle Simahla AT641A Nano ... Bona amanqaku Jonga umnikelo
Okona kulungileyo	Namvo 4pcs 200 Micron...
Umgangatho wexabiso	I-Aquarium yaseLwandle ...
Oyintandokazi yethu	Amanzi olwandle
ICargo Cargo Slim Bio ...
Siza kubonisa uluhlu oluncinci lwezona ndawo zithengisa kakhulu elwandle kwaye, ke ngoko, zihlala zilungele iimfuno eziqhelekileyo zentlanzi.
Ulwandle Simahla AT641A
Le modeli ye-aquarium iza mnyama kwaye Inomthamo weelitha ezingama-96. Enye yezona modeli zigqibeleleyo zohlobo lweNANO kwimarike yonke. Apho kufakwa khona iscimmer kunye nempompo. Ungathenga le modeli ngokunqakraza apha.
Amanxweme asimahla AT560A Nano Marine Aquarium
Le yenye yemodeli encinci ye-aquarium evela kuluhlu lweNANO olubonisa umbala omnyama kunye umthamo weelitha ezili-16 kuphela zamanzi. Yiza nekhithi ebandakanya skimmer kunye nempompo. Ukuba ufuna ukuthenga le aquarium cofa apha.
I-Marina Aquarium Kit enezibane ze-LED
Olu hlobo lwe-aquarium lwenziwe ngeglasi. Inesihluzo se-backpack esine-ultra-enikezelweyo esineenkqubo ezikhawulezayo zokusebenzisa i-cartridge. I-aquarium inesiphelo esihle kwaye ineempawu ezihlala ixesha elide, ukukhanya kwendalo kwe-LED. Masingakulibali ukuba ukukhanya kwe-LED kusindisa kakhulu ekusebenziseni kwaye kubonelela ngokukhanya kwendalo, ukulinganisa ubuninzi beemeko zendalo zezinto eziphilayo zolwandle.
Umnatha wenziwe ngomnatha ocolekileyo nothambileyo ukukhusela amaphiko athambileyo entlanzi. Imilinganiselo yale aquarium ingama-51.3 "x 26" x 32.8 "phezulu. Ungacofa apha ukuthenga olu hlobo lwe-aquarium yolwandle.
Le aquarium yeyoluhlu olutsha lwamanzi akwi-NANO uluhlu olunika isitayile sangoku kunye neglasi engaphambili eyahlukileyo. Le yindlela esifumana ngayo, kungekuphela nje ukukhathalela iintlanzi zethu ngokuchanekileyo, kodwa kunye nesitayile esothusayo kumakhaya ethu.
I-aquarium ixhotyiswe ngenkqubo yokuhluza yamanqanaba amathathu kunye nolawulo lwe-infrared kude esivumela ukuba sikhethe phakathi kwemibala eyahlukeneyo kunye neziphumo ezizodwa. Enkosi kwezi ziphumo sinokuqhubeka ngokuguqula ukubonakala kwe-aquarium yethu. Ngenxa yoku, inezibane ze-LED ezinobushushu bombala we-7500K. Ukuba ufuna le aquarium ungayithenga ngokunqakraza apha ngexabiso elifikelelekayo.
Yintoni i-aquarium yolwandle
Njengoko besitshilo ekuqaleni kwenqaku, ikakhulu bahlulahlula phakathi kwamanzi aphilayo kunye neelwandle zasemanzini. I-aquariums zamanzi acocekileyo zezo ziqulathe izilwanyana kunye nezityalo ezivela kwindawo ezinamanzi amnandi ezinjengemilambo, imilambo kunye namachibi. Nangona kunjalo, ii-aquariums zaselwandle zihlala izilwanyana kunye nezityalo ezivela elwandle. Umahluko phakathi kwazo zombini ezi ntlobo ze-aquarium kukuba umntu unamanzi anetyuwa kuba avela elwandle.
Ngesi sizathu, amanzi olwandle ayimfuneko ukugcina impilo echanekileyo yeentlanzi zethu. Ukongeza, sinokuba nezityalo zaselwandle zokuhombisa kunye nokwenziwa kwendalo ngokufanayo nendalo. Asimele silibale ukuba, ngawo onke amaxesha, kufuneka siphinde senze imeko yendalo yentlanzi zethu.
Iindidi zamanzi olwandle
Njengoko kulindelwe, kukho iindidi ngeendidi zamanzi olwandle ngokuxhomekeke kwindalo esiya kuyo. Siza kudwelisa kwaye sichaze ngokufutshane nganye nganye:
I-aquarium yaselwandle eneentlanzi kuphela kunye nezinambuzane: Zezona zilula ukuzigcina kwaye siza kuba neentlobo ezahlukeneyo zeentlanzi kunye nezingenamqolo ezinje ngeepranini, iinkwenkwezi, iinkumba kunye nononkala, phakathi kwezinye izinto.
I-Reef Marine Aquarium: Ngaba zizo zasemanzini, ukongeza kwiintlanzi kunye nezinambuzane, nazo zineekorale zeentlobo ezahlukeneyo. Ezi aquariums zinzima ngakumbi ukuzigcina nangona zinomtsalane ngakumbi kwi-hobbyist. Ukuze sikwazi ukubakhathalela ngokuchanekileyo siya kufuna ukukhanya okwaneleyo okuvumela ukukhula kweekorale. Ukongeza, kubalulekile ukugcina ukujikeleza kwamanzi ngokufanelekileyo kwaye zonke iiparameter zilawulwa kakuhle kuxhomekeke kwiindidi zekorale esinazo.
I-Aquariums eneekorale ezithambileyo: zilula ukuzigcina kuba ziyamelana kwaye azidingi ukubeka esweni rhoqo kunye nokongezwa kwezinongo emanzini. Ukutya kwabo ikakhulu iphotosynthetic.
I-Aquariums eneekorale ezilukhuni: Zezona zinzima kakhulu ukuzigcina kuba zifuna ukulawula kakuhle iiparameter ezisisiseko ukuze ziphuhliswe ngokuchanekileyo. Bayakufuna amaxabiso alawulwayo e-calcium, i-magnesium kunye ne-alkalinity.
Ukhathalelo lwee-aquariums zaselwandle
Ukunyamekela ngokufanelekileyo iintlanzi kwi-aquarium yolwandle, kufuneka sithathele ingqalelo izinto ezahlukeneyo ezingenelela kumgangatho wayo.
yakhe amanqanaba etyuwa, umxholo wamaminerali, ukungabinamanzi, isixa sokukhanyisa, ioksijini enyibilikisiweyo yamanzi, umoya opholileyo, iintlobo zeentlanzinjl. Kufuneka sikhethe amaxabiso abekiweyo kuxhomekeke kuhlobo esilukhathaleleyo.
Ukuhamba ngebhayisikile kwi-aquarium yaselwandle akukho ngaphezu koko inkqubo yekoloniyali colonization. Le nkqubo ihlala ithatha umndilili wenyanga enye kwaye kufuneka ihlonitshwe ngokupheleleyo ukuze izilwanyana zihlale kwimeko entle. Njengazo zonke izinto eziphilayo, iintlanzi zivelisa inkunkuma. Ngaphandle kobukho bekholoni yebhaktiriya, ezi zinto zinetyhefu ziya kuqokelelana ngokuqhubekayo. Kungenxa yoko le nto kufuneka ukuba kubekho ikholoni yebhaktiriya ezalisekisa umsebenzi obalulekileyo. Ukulumka, kungcono ukulinda ngaphezulu kwenyanga ukujonga umgangatho wamanzi ngaphambi kokufaka izilwanyana kwi-aquarium yaselwandle.
Ubushushu yenye yezona zinto zibalulekileyo ekufuneka zithathelwe ingqalelo kwi-aquarium yolwandle. Kuxhomekeka kuhlobo lweentlanzi esinazo, kufuneka sibe neqondo lobushushu eliphakathi. Umzekelo, ukuba sinentlanzi yetropiki siyakufuna ubushushu obuphezulu noko. Ngenxa yoku, kubalulekile ukuba ubenethemometha eya kuthi isixelele ngalo lonke ixesha ngamaqondo obushushu afanelekileyo e-aquarium.
Ngaba zikho iilwandle zasemanzini zabaqalayo?
Kananjalo, akukho aquarium yolwandle yabaqalayo. Ngokwayo, ukuba yi-aquarium yolwandle kuthwala ubunzima obongeziweyo. Nangona kunjalo, ukuba sisebenzisa ii-aquariums zaselwandle ezinentlanzi kuphela kunye nezingenamqolo, oko kuya kusinceda sifunde ngenkathalo yabo. Ukuba usaqala, kungcono ukuba ungakhethi ii-aquariums zaselwandle ezinokorale ezilukhuni okanye ezithambileyo.
Uyenza njani i-aquarium yaselwandle engabizi kakhulu
Ukwenza i-aquarium yaselwandle ngexabiso eliphantsi kufuneka siqwalasele izinto ezithile. Into yokuqala kukusebenzisa ii-aquariums ezinkulu ze phakathi kwama-250 nama-300 eelitha ukuzinzisa nokunciphisa umda wempazamo. Kwiindawo ezincinci zasemanzini akukho nqanaba laneleyo lokuzinza kwicandelo leekhemikhali.
Siza kusebenzisa kuphela iintlobo zeentlanzi ezinerock ephilayo. I-aquarium eneentlanzi kunye nezilwanyana ezingenamqolo ezinokusigcinela imali eninzi ngokungafaniyo neekorale zamanzi zekorale. Siza kusebenzisa uhlobo lwe-LED yokukhanyisa iibhalbhu eziya kuthi zisinike umgangatho olungileyo kunye nexabiso eliphantsi.
Singazithenga izinto eziyimfuneko nezinto ezisetyenzisiweyo kodwa ngeentloko. Kukho abantu abafuna ukuthatha ithuba labanye kwaye baphele ngokuthengisa kwizinto ezisandula ukwenziwa kwaye ezingakwaziyo ukufeza umsebenzi othunyelwe kubo. Kuya kufuneka uqhubeke ngononophelo ukuthenga izinto ezisetyenzisiweyo kodwa zinomthombo othembekileyo. Le mithombo ingangumhlobo wokuzonwabisa, abathengisi bendawo abathembekileyo, okanye uhlolo olwenziweyo lwezixhobo eziza kuthengwa ngaphambili, ukuba kunokwenzeka, zikhatshwa ngumntu onolwazi.
Kuyimfuneko ukuba nezixhobo ezifanelekileyo ukuba siza kuba ne-akwariyam ye-state-of-art. Ukuzenzekelayo yonke inkqubo kangangoko kunokwenzeka kuyimfuneko ukuba sifuna ukugcina i-euro ezimbalwa. Kukho abantu abakhetha ukutyala ixesha elincinci kulondolozo kunye nokunakekelwa kwezilwanyana zaselwandle ze-aquarium ngexabiso lokunciphisa iindleko ngenxa yetekhnoloji ephantsi. Nangona kunjalo, eyona nto ifanelekileyo kukusebenzisa izixhobo zetekhnoloji ezinokufikelela kwiimfuno ezisisiseko kunye notyalo-mali olusezantsi kwitekhnoloji.
Ukuthenga izixhobo ezifanelekileyo kwexabiso lethu yeyona ndlela ilungileyo. Ngokuqinisekileyo lelona cebiso lililo anokukunika lona kukuzonwabisa. Izixhobo ezingabizi kakhulu zihlala zithotywa ngokukhawuleza. Oku kuthetha ukuba inobomi obufutshane obufutshane kwaye kuya kufuneka sichithe imali eninzi ukuyitshintsha rhoqo. Ke ngoko, akufuneki sijonge kuphela kweyona nto inexabiso eliphantsi kwintengiso, kodwa hayi kweyona ibiza kakhulu. Eyona nto intle kukuphanda ukuba loluphi uphawu olusinika owona mgangatho uphezulu kunye nexabiso.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga neelwandle zasemanzini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi olwandle » Amanzi olwandle